नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने माेदीकाे विश्वास
भारत । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा सन्देश राख्दै उनले भनेका छन्,-“आपसी फाइदा, सद्‌भाव र समझदारीको आधारमा नेपालसँगको जनताकेन्द्रित ...विस्तृतमा पढ्नुस्
22 Baishakh 2075 Saturday प्रतिकृया दिनुहोस
अव उत्तर र दक्षिणको एउटै समय
उत्तर कोरियाले आफ्नो देशको समय परिवर्तन गरेको छ । गतहप्ता दक्षिण कोरियासँग भएको वार्तापछि उत्तर कोरियाले आफ्नो समय क्षेत्र ‘टाइम जोन’ परिवर्तन गरेको हो । उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाको समयसँग मिल्ने गरी आफ्नो समय परिवर्तन ...विस्तृतमा पढ्नुस्
पाकिस्तानमा गौतम बुद्धको २३ सय वर्ष पुराना दुर्लभ मूति फेला
पाकिस्तान । पाकिस्तानको भामला स्तुपमा गौतम बुद्धको २३ सय वर्ष पुराना दुर्लभ मूर्ति भेटिएको छ । पाकिस्तानको उत्तर पश्चिममा अवस्थित खैबर पख्तून्ख्वाह जिÞल्लामा रहेको भामला क्षेत्रमा ती दूर्लभ मूर्ति भेटिएको बीबीसीले जनाएको छ । बीबीसीका ...विस्तृतमा पढ्नुस्
जापान । एउटा रोबटले के सम्म गर्न सक्ला ? मानिसले मानिसकै सहयोगका लागि उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाएको हरेक रोबटले अहिले नै मानिसको कल्पनाभन्दा बाहिरको काम गरिरहेको छ । अनि, भविष्यमा रोबटको उत्पादन र विकासको ...विस्तृतमा पढ्नुस्
चीन । तपाइँलाई के को जुस मन पर्छ ? कसैले तपाइँलाई यो प्रश्न सोधे, जवाफ पक्का पनि कुनै फलफुल वा तरकारीको नाम नै हुने छ । तर कुनै किरा फट्यांग्रा वा जनावरको पनि जुस बन्छ ...विस्तृतमा पढ्नुस्
17 Baishakh 2075 Monday प्रतिकृया दिनुहोस
अफगानिस्तानको काबुलस्थित नेटो मुख्यालय नजिकै शक्तिशाली बम विष्फोट, ६ सञ्चारकर्मीसहित कम्तिमा २५ जनाको मृत्यु
अफगानिस्तान । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको आत्मघाति आक्रमणमा परि कम्तिमा २५ जनाको मृत्यु भएको छ । कावुलको शश दारक क्षेत्रमा भएको बिस्फोटमा ४५ जना घाइते भएका छन् । पहिलो विस्फोटमा घाइते भएकाहरुको उद्धार भैरहदा अर्को ...विस्तृतमा पढ्नुस्